चो’री गर्नका लागि गएको चो’र घरभित्रै निदाएपछि , – Life Nepali
चो’री गर्नका लागि गएको चो’र घरभित्रै निदाएपछि ,
हिजो यति धेरै निन्द्रा लागेको थियो कि खाना खाना साथ म त भुसुक्कै निदाएछु । यो आम ब्यक्तिको जिवनमा भइरहने घ’टनाको कथन हो । तर यो निन्द्रा सबैका लागी उपयोगी नहुन सक्छ । अझ चोरहरुको मामलामा त निदाउनु हा’निकारक मानिन्छ । अझ चोरी गर्न गएको स्थानमा नै कोहि निदायो भने के होला ?
भारतको कर्नाटक राज्यको चर्चित शहर बैंगलुरुमा एक चोर, अबेर राति चोरी गर्न निस्किए । तर चोरी गर्दा ति चोर चोरी गर्न गएकै घरको सोफामा निदाए । तर जब घर मालिक घर आए उनले अनजान ब्यक्तिलाई आफ्नो घरको सोफामा मस्त सुतेको देखे । ती चोरको हातमा आफ्नो घरको चाबि समेत देखेपछि ति घर मालिकको रिसको सीमा रहेन र उनले चो’रलाई निकै कु’टे ।
त्यसपछि मात्र उनले प्रहरीलाई बोलाई जिम्मा लगाए । प्रहरीले उनलाई प’क्राउ गरी चोरी मु’द्धामा कारागार पठाएको छ । न’शालु पर्दाथको सेवनका कारण चो’रलाई निन्द्रा लागेको र सोफा देख्नासाथ निदाएको प्रहरीले बताएको छ ।
Previous कोरोना उपचारमा ख’टेकी नर्स , भि’त्री व’स्त्र मात्र लगाएर पुरुष वार्डमा गएपछी यस्तो सम्म भयो !
Next कुवेत पुगेकी चेली भन्छिन् , बिदेशमा नेपाली दाजुभाइले सहयोग गर्ला भन्दा Love पो गरम भन्छन”